त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दुबईबाट आएका एक ब्याक्तिले अनौठो व्यवहार देखाएर चेकजाँच गर्दा त…… – List Khabar
Home / समाचार / त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दुबईबाट आएका एक ब्याक्तिले अनौठो व्यवहार देखाएर चेकजाँच गर्दा त……
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दुबईबाट आएका एक ब्याक्तिले अनौठो व्यवहार देखाएर चेकजाँच गर्दा त……
admin November 10, 2021 समाचार Leaveacomment 153 Views
‘अब तमोर नदीमा मेसिन तराउन छ । नदी तर्नु अगाडि एक पटक पूजापाठ गरेर तमोर नदी तार्ने तयारी भइरहेको छ’, उनले भने । तमोर नदी पार गरेर नदीको किनार हुँदै चीन रिउ बजारसँग कोरिडोले जोडिनेछ ।
करिब १८० किलोमिटर लम्बाइको यो सडक धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका–२ देखि पाँचथरको लुबुघाट माझिटार ताप्लेजुङ छिचोलेर ओलाङचुङगोला हुँदै नेपाल र चीनको नाका टिप्तालासम्म पुग्नेछ । यो सडकखण्डमा विभिन्न आकारका १० वटा पुल निर्माण हुने क्रममा रहेको ओयोजनाले जनाएको छ ।
Previous ट्रयापमा पारेर २२ बर्षिय भुपेन्द्रको …….
Next यी युवतीले किन गरिन कुकुरसँग धुमधाम विबाह ? कारण थाहा पाउदा पर्नुहुनेछ चकित